Posted by ကို Tranquillus | ဒီဇင်ဘာလ 26, 2018 | ရေးသားပါးစပ်ဆက်သွယ်ရေးကျွမ်းကျင်မှု
အဆိုပါအီးမေးလ်က ကျွန်ုပ်တို့အများစုအတွက် ဦးစားပေးဆက်သွယ်ရေးကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ပြောဆိုရန် ကျွန်ုပ်တို့၏စကားစမြည်ပြောဆိုသူနှင့် တစ်ချိန်တည်းတွင် ကျွန်ုပ်တို့ရရှိနိုင်ရန် မလိုအပ်သောကြောင့် အီးမေးလ်သည် ကောင်းမွန်ပါသည်။ ၎င်းသည် ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ မရရှိနိုင်သောအခါ သို့မဟုတ် ကမ္ဘာ၏အခြားဘက်ခြမ်းတွင် လက်ရှိပြဿနာများကို ရှေ့ဆက်လုပ်ဆောင်နိုင်စေပါသည်။
သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့အများစုသည်အဆုံးမဲ့အီးမေးလ်စာရင်းတွင်ရေနစ်သေဆုံးခဲ့သည်။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်တွင်ထုတ်ပြန်သောအစီရင်ခံစာအရပျမ်းမျှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တစ် ဦး သည်တစ်နေ့လျှင်အီးမေးလ် ၁၀၀ ကျော်လက်ခံရရှိကြောင်းပေးပို့သည်။
ထိုမှတပါး, အီးမေးလ်များကိုလည်းအလွယ်တကူနားလည်မှုလွဲနေကြပါတယ်။ မကြာသေးမီကလေ့လာမှုလူများ Sendmail 64% အမျက်ဒေါသသို့မဟုတ်မရည်ရွယ်သောရှုပ်ထွေးမှုများဖြစ်ပေါ်စေတဲ့အီးမေးလ်ကိုစေလွှတ်သို့မဟုတ်လက်ခံရရှိကြောင်းဖော်ပြခဲ့တယ်။
ကြောင့်ကျနော်တို့ send and receive အီးမေးလ်များကို၏အသံအတိုးအကျယ်ရန်နှင့်အီးမေးလ်များကိုမကြာခဏအဓိပ္ပာယ်ကောက်မမှားနိုင်တဲ့အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်, တကရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့စုံစုံထုံးစံတက်ဆွဲရန်အရေးကြီးပါသည်။
စနစ်တကျတဲ့ professional အီးမေးလ်ကိုရေးသားဖို့ကိုဘယ်လို
တိုတိုနှင့်တိကျသောအီးမေးလ်များကိုအီးမေးလ်ကစီမံခန့်ခွဲမှုအတွက်ရရှိနိုင်သောအချိန်ကိုလျှော့ချခြင်းနှင့်သင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းစေမည်ရေးပါ။ တိုတောင်းသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုစောင့်ရှောက်ခြင်းအားဖြင့်, သင်ဖြစ်ကောင်းတခြားအလုပ်တွေကိုအပေါ်အီးမေးလ်နှင့်အချိန်ပိုမိုအပေါ်လျော့နည်းအချိန်ဖြုန်းပါလိမ့်မယ်။ သူကပြောပါတယ်, ရှင်းလင်းစွာရေးသားနေတဲ့ကျွမ်းကျင်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သင်လိုအပ်ပါလိမ့်မယ်အားလုံးကျွမ်းကျင်မှုအဖြစ် ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအပေါ်အလုပ်လုပ်ကြသည်.
အစအဦး၌, သင်သည်တာရှည်သောအီးမေးလ်များရေးသားဖို့တိုတောင်းသောအီးမေးလ်များရေးသားဖို့အဖြစ်အချိန်အများကြီးလိုအပ်နိုင်ပါသည်။ သူတို့ကိုသင်ပိုမိုလျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ကူညီကြလိမ့်မည်သည့်၎င်းတို့၏ Inbox ထဲတွင်လျော့နည်းစုပြုံပြွတ်သိပ် add ပါလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သို့သော်ဤကိစ္စတွင်ပင်လျှင်မူကား, သင်ပိုမိုအကျိုးဖြစ်ထွန်းလိမ့်ရန်သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်, client များသို့မဟုတ်န်ထမ်းကူညီပေးပါမည်။
ရှင်းလင်းစွာရေးသား, သင်သူလိုလားအရာကိုအဘယ်သူသိနိုင်နှင့်အမှုတို့ကိုပြုရရှိသွားတဲ့သူတစ်ဦးအဖြစ်လူသိများလိမ့်မည်။ နှစ်ဦးစလုံးသည်သင်၏အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအလားအလာများအတွက်ကောင်းပါတယ်။
"ဘာကြောင့်ငါကပေးပို့ကြဘူး: သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်ရေးသားဖို့ထိုင်တိုင်းအချိန်, ကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးရန်စက္ကန့်အနည်းငယ်ယူ? ငါလက်ခံရရှိသူ၏မျှော်လင့်ထားဘာလဲ?
သငျသညျဤမေးခွန်းများကိုမဖြေနိုင်လျှင်သင်အီးမေးလ်တစ်စောင်မပို့သင့်ပါတယ်။ သင်သင်၏အချိန်နှင့်သင့်လက်ခံရရှိသူကိုဆုံးရှုံးစေသည်လိုအပ်သောအရာကိုမသိဘဲအီးမေးလ်များကိုရေးပါ။ သင်ချင်တယ်အတိအကျအဘယ်အရာကိုမသိလျှင်, သင်ကျိန်းသေရှင်းလင်းစွာလိုရင်းတိုကိုယ့်ကိုယ်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုဖို့ရုန်းကန်ပါလိမ့်မယ်။
ဖတ်ရန် ပရော်ဖက်ရှင်နယ် အီးမေးလ်တွင် အဖြစ်အများဆုံး အမှားများ
အီးမေးလ်များနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်မှန်သည်။ သင်သည်သင်၏အီးမေးလ်များအတွင်းရှိကွဲပြားခြားနားသောဘာသာရပ်များပါဝင်သည်ဘဲနေလျှင်, ပိုပြီးအရာခေါ်ဆိုမှုမှဥာဏ်ဖြစ်လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ဒစိုးမိုးရေးလေ့ကျင့်ဖို့ကောင်းတစ်ဦးအယူအဆရဲ့အဘယ်ကြောင့်မယ့် "တစ်ကြိမ်အရာ။ " သငျသညျကိုသာပေးပို့နေ့စဉ်အီးမေးလ်ကိုတစ်ဦးအရာဖြစ်သောအကြောင်းအရာများကိုလုပ်ပါ။ သင်သည်အခြားစီမံကိန်းကိုအပေါ်ဆကျသှယျဖို့လိုအပ်ခဲ့လျှင်အခြားအီးမေးလ်ကိုရေးပါ။
ဒါဟာအစကိုယ့်ကိုယ်ကိုမေးမယ့်ကောင်းသောအချိန်: "? အတွက်ဤအီးမေးလ်ကလိုအပ်သောတကယ်က" တနည်းကား, သာလုံးဝလိုအပ်သောအီးမေးလ်များကိုသင်အီးမေးလ်များကိုစေလွှတ်သောပုဂ္ဂိုလ်မှလေးစားမှုကိုပြသ။
အလုပ်များဖြစ်ကြသည်။ သူတို့ကသင်လိုချင်သောအဘယ်အရာကိုခန့်မှန်းဖို့အချိန်မရှိဘူး, သူတို့ကသင့်အီးမေးလ်ကိုဖတ်ရှုခြင်းနှင့်လျင်မြန်စွာတုံ့ပြန်ချင်တယ်။
တစ်ဦးချီးမွမ်းလိုပဲ။ သူတို့ကိုသင်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏အလုပ်အကြောင်းကိုအပြုသဘောတစ်ခုခုပြောနိုင်ပါကလုပ်ပါ။ သင့်ရဲ့စကားလည်းယိုယွင်းလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
ကျေးဇူးတင်ကြောင်းခံရဖို့ကြိုက်တယ်။ လက်ခံသူသမျှမည်သည့်လမ်း၌သင်တို့ကိုအကူအညီပေးခဲ့ပြီဆိုရင်, သူ့ကိုကျေးဇူးတင်ဖို့သတိရပါ။ သင်ကူညီပေးဖို့ဟာသူတို့ရဲ့အလုပ်င်အခါသင်အတူတူလုပျသငျ့သညျ။
သင်သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်တစ်စုံတစ် ဦး ထံအီးမေးလ်ပို့သောအခါသင်မည်သူဖြစ်ကြောင်းကိုလက်ခံသူအားပြောပြရန်လိုအပ်သည်။ သငျသညျများသောအားဖြင့်တစ်ဝါကျ၌ဤလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ -“ ပွဲ [X] မှာသင့်ကိုတွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ "
ယင်းတင်ပြချက်များကိုအတိုကောက်ဖို့တလမ်းတည်းဖြင့်သင်မျက်နှာချင်းဆိုင်တွေ့ဆုံခဲ့လျှင်အဖြစ်ရေးသားဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျလူတစ်ဦးအတွက်တစ်စုံတစ်ဦးကဖြည့်ဆည်းသည့်အခါတစ်ခုအားသင် monologue သို့ငါးမိနစ်ခန့်သွားရလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ဒါကြောင့်အီးမေးလ်ထဲမှာမလုပ်ကြပါဘူး။
တစ်ဦးမိတ်ဆက်လိုအပ်လျှင်သင်မသိရပါဘူး။ ဒီတစ်ခါလည်းသင်ပြီးသားလက်ခံသူဆက်သွယ်မေးမြန်းရာပါတယ်, ဒါပေမယ့်သူမဟာသင်မှတ်မိပါလိမ့်မယ်လျှင်သင်မသိရပါဘူး။ သင်သည်သင်၏အီးမေးကိုလက်မှတ်အတွက်သင့်ရဲ့စကားဝှက်ကိုစွန့်ခွာနိုင်ပါတယ်။
ဤသည်နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းကာကွယ်ပေးသည်။ သငျသညျပြီးသားသင်ရိုင်းစိုင်းပေါ်လာသိတယ်သူကိုတစ်စုံတစ်ဦးကမှတဖန်တင်ပြ။ သူမသငျသညျကိုသိလျှင်သူမသိကျွမ်းမပါဘူးဆိုရင်, သင်ရုံသင့်ရဲ့လက်မှတ်ကိုအတည်ပြုဖို့ပါစေနိုင်ပါတယ်။
ဒီအကြံပေးချက်ကိုအီးမေးလ်များရေးသားအထူးသဖြင့်အခါ, ယနေ့ ပို. ပင်သက်ဆိုင်ရာဖြစ်ပါတယ်။
Active ကိုအသံဖြင့်ဖတ်ပါရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်။ ဤသည်ကိုလည်းအရေးယူနှင့်တာဝန်အားပေးထားသည်။ အမှန်မှာထိုတက်ကြွအသံ, စာပိုဒ်တိုများပြုမူသူကိုအာရုံစိုက်ပါ။ အဆိုပါ passive အသံ, စာကြောင်းကျနော်တို့ပြုမူသောအရာဝတ္ထုအာရုံစိုက်ပါ။ အဆိုပါ passive အသံကြောင့်အမှုအရာမိမိတို့ကိုယ်ကိုအားဖြင့်ဖြစ်ပျက်ကြောင်းထင်ရပေမည်။ ကလူပြုမူလာသောအခါတက်ကြွစွာအရာသာဖြစ်ပျက်။
တိုတောင်းသင့်ရဲ့အီးမေးလ်များကိုစောင့်ရှောက်ဖို့အဓိကသော့ချက်ကဘာလဲ? စံဖွဲ့စည်းပုံကိုသုံးပါ။ ဒါဟာသင်ရေးလိုက်တိုင်းအီးမေးလ်ကိုလိုက်နာနိုင်မယ့် template ကိုဖြစ်ပါတယ်။
ဖတ်ရန် တစ် ဦး လုပ်အားခအလှဆင်ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်ဖို့နမူနာစာ
ဒါကအီးမေးလ်၏ပထမလိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ "မင်္ဂလာပါ [အမည်]" ပုံမှန်နှုတ်ဆက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
သင်ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဘို့တစ်စုံတစ်ဦးကိုမေးပို့လိုက်ပါအခါ, တစ်ဦးချီးမွမ်းတဲ့အကြီးအက start ဖြစ်ပါတယ်။ တစ်ဦးကကောင်းစွာစာဖြင့်ရေးသားချီးမွမ်းလည်းတစ်ဦးနိဒါန်းအဖြစ်အစေခံနိုင်ပါတယ်။ ဥပမာ:
“ [တင်ဆက်မှု] [နေ့စွဲ] တွင်သင်၏တင်ဆက်မှုကိုကျွန်ုပ်နှစ်သက်ခဲ့သည်။ "
မင်းရဲ့ဘလော့ဂ်ကို [ခေါင်းစဉ်] မှာတကယ်အသုံးဝင်ခဲ့တယ်။ "
“ ပွဲတော်မှာမင်းနဲ့တွေ့ရတာဝမ်းသာပါတယ်။ "
သင့်အီးမေးလ်၏အကြောင်းရင်း။ ဤအပိုင်းတွင်၊ သင် "မေးရန်အီးမေးလ်တစ်စောင်ပို့ပေးပါ" သို့မဟုတ် "သင်ကူညီနိုင်မလားငါစဉ်းစားမိတယ်" ဟုသင်ပြောလိမ့်မည်။ တစ်ခါတစ်ရံသင်ရေးသားရခြင်း၏အကြောင်းရင်းကိုရှင်းပြရန်ဝါကျနှစ်ခုလိုအပ်လိမ့်မည်။
အရေးယူမှတစ်ဦးကခေါ်ဆိုခ။ သငျသညျအီးမေးလ်ဖြင့်ပေးပို့သည့်အဘို့သင့်အကြောင်းပြချက်ကရှင်းပြသည်င့်ပြီးတာနဲ့လက်ခံသူဘာလုပ်ရမယ်ဆိုတာသိပါလိမ့်မယ်ဟုမယူဆကြဘူး။ တိကျတဲ့ညွှန်ကြားချက်ပေး။ ဥပမာ:
"လာမယ့်နှစ်ပတ်ထဲမှာမင်းရေးမလား။ " "
"ကျေးဇူးပြုပြီး Yann ဆီစာရေးပါ။ ပြီးရင်မင်းငါ့ကိုပြောပြပါ။ "
သင်၏တောင်းဆိုမှုကိုမေးခွန်းပုံစံဖြင့်ဖွဲ့စည်းခြင်းအားဖြင့်လက်ခံသူသည်တုံ့ပြန်ရန်ဖိတ်ကြားခံရသည်။ တစ်နည်းအားဖြင့်သင်ဤသို့လုပ်နိုင်သည် - "ဒါကိုလုပ်တဲ့အခါငါ့ကိုအသိပေးပါ" သို့မဟုတ် "ဒီဟာကသင့်အတွက်အဆင်ပြေမလားသိပါစေ" "
ပိတ်ပွဲ။ သင့်အီးမေးလ်ပေးပို့ခြင်းမပြုမီ, တစ်ဦးပိတ်ပွဲမက်ဆေ့ခ်ျကိုထည့်သွင်းရန်သေချာစေပါ။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရန်သင့်ခေါ်ဆိုခတင်ရန်နှင့်လက်ခံရရှိသူအကောင်းခံစားမိစေရန်ကို dual ရည်ရွယ်ချက်ရှိပါတယ်။
“ ဒီအကူအညီနဲ့မင်းရဲ့ကူညီမှုအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ "
ဤသူသည်သင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်ပါသည် "သင်၏", "ရိုးသားစွာ", "ကောင်းမွန်သောနေ့ရက်ကို" သို့မဟုတ် "" ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ရှင်းရှင်းလင်းလင်းနဲ့ပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီးမေးလ်များရေးသားဖို့ဘယ်လိုနေသလဲ? မေလ 10th, 2020Tranquillus
သာမာန်ယဉ်ကျေးသောဖော်မြူလာတွင် အများအားဖြင့် အချက် ၄ ချက် ပါဝင်ပါသည်။